Hogaamiyaha xisbiga Sverige Demokrat oo aan lagu casuumin xafladda Nobel. - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Hogaamiyaha xisbiga Sverige Demokrat oo aan lagu casuumin xafladda Nobel.
La daabacay torsdag 3 november 2011 kl 11.02
Sidii sanadkan kii ka horreeyay oo kale ayaan waxaan lagu casuumin hoggaamiyaha xisbiga Sverige Demokrat-ka Jimmie Åkesson xaflada lagu bixin doono abaalmarinada Nobel ee dhici doonto 10-ka bisha soo socota ee Diseember iyada oo dhinaca kale xaflada lagu casuumay hoggaamiyayaasha kale ee xisbiyada ku jira baarlamanka.
Guddoomiyaha cusub ee guddiga maamula bixinta abaalmarinta Nobel Lars Heikensten ayaa hadal qoraal ah oo uu saaray waxuu ku sheegay in aysan jirin sabab lagu bedeli karo go’aankii sanadkii hore ee ahaa in aan xaflada lagu casuumin Jimmie Åkesson waayo baa la leeyahay xisbiga Jimmie Åkesson ee Sverige Demokrat-ka ayaa lidi ku ah mabaadi’da ku jiray dardaarinkii Alfred Nobel oo ah hidisihii reer Iswiidhan ee loogu magac daray abaalmarinta.
Jimmie Åkesson ayaa isaga waxuu qabaa in sababta loogu diiday ka qeyb galka xaflada ay salka ku heyso faham qaldan oo laga qabo siyaasada xisbigiisa isaga oo dhinaca kalana sheegay in ka qeyb galida xaflada aysan kala maqneen isaga muhiimad gaar ah uuna ka la mid yahay sagaalka milyan ee ruux ee Iswidhishka ah ee aan lagu casuumin ka qeyb galka xafladda.
Xaflada lagu bixiyo abaalmarinada Nobel ayaa ah mid caalami ah lehna muhiimad aad u weyn.